News - Sidee loo doortaa masaxa ilmaha?
4-ta talaabo ee fudud, waxay ku barayaan inaad doorato tirtirid nabdoon!
1: Eeg waxyaabaha ku jira iyo baakadaha.
Waalidiintu waa inay ka soo iibsadaan masaxa ilmaha qoyan kanaalka caadiga ah, waana inay si taxaddar leh u eegaan markay dooranayaan:
Maaddooyinka wax soo saarka, waxaa ugu wanaagsan in la doorto badeecadaha si cad loogu calaamadeeyay inaysan ku jirin maaddooyinka aan badbaadada lahayn sida aalkolada, dhadhanka, iyo walxaha dhaadheer.
Baakadaha alaabada iyo buugaagta, ka dooro badeecadaha soo saarayaasha caadiga ah ee leh cinwaanka warshad faahfaahsan, nambarka taleefanka adeegga, heerarka nadaafadda, heerarka hirgelinta, iyo liisamada nadaafadda ee khuseeya waaxda caafimaadka.
2: urta urta.
Iskuday inaadan dooran ilmaha masaxa ee ay kujiraan udgoonada adag ama urka urta sida aalkolada.
S: Weydii khibrada iyo waxyaabaha ku jira.
Nadiifinta wanaagsan ee qoyan ma sababi doonto cuncun maqaarka ah sida casaan, barar iyo xoqasho. Markay astaamahani muuqdaan, waxaa lagugula talinayaa inaad si dhakhso leh u joojiso isticmaalkeeda.
Markii aad iibsaneysid ama aad beddeleyso astaanta tirtirka qoyan markii ugu horreysay, waxaad weydiin kartaa wax badan oo ku saabsan khibrada isticmaalka hooyooyinka kugu hareeraysan, sidoo kale waxaad la tashan kartaa kaaliyaha dukaanka ama shaqaalaha adeegga macaamiisha.
3: Taabo maaddada.
Xullo masaxa ilmaha waxyaabo jilicsan oo aan sahlaneyn in la nuugo, si khibrada ilmaha ay u noqoto mid raaxo leh;
Isla mar ahaantaana, masaxaadda qoyan ee leh maaddooyinka fudud ee fudud waa inay noqdaan kuwo aan dheg-dheg iyo xaydh lahayn marka gacmaha lagaa masaxo. Haddii biyaha la tuujiyey ay yihiin daruur iyo muuqaal, waxaa laga yaabaa inay ku jiraan waxyaabo badan oo dheeri ah.
Maqaarka ilmaha ayaa ka jilicsan oo xasaasi ah. Haddii loo baahdo, waalidiinta ayaa iibsan kara oo tijaabin kara ka hor inta aysan go'aan gaarin.
Dhammaan maaddooyinka waxaa lagu calaamadeeyay baakadka, iyada oo aan lahayn wax shey kiimiko ah, iyo caanaha geedka oo dhan ayaa la isticmaalaa.
In kasta oo aysan jirin wax shuruud ah oo lagu calaamadeeyo dhammaan waxyaabaha ku jira baakadaha carruurta tirtiro ee Shiinaha, Yurub, Taiwan, Shiinaha iyo meelo kale, masaxa qoyan waxaa iska leh maareynta alaabada daryeelka maqaarka, waana qasab in la calaamadeeyo dhammaan maaddooyinka.
Masaxayada Pei'ai ee masaxa waxay u baahan yihiin heerar sare iyo shuruudo adag oo naftooda ah, calaamadee dhamaan maaddooyinka, ixtiraam xuquuqda macaamiisha ay u leeyihiin inay ogaadaan, si hooyo kasta ay u doorato una u isticmaasho si fudud.
Waqtiga boostada: Mar-25-2021